Pakistana : Misokatra ny fihazàna mba hahitàna an’i Baituallah Mehsud · Global Voices teny Malagasy
Pakistana : Misokatra ny fihazàna mba hahitàna an'i Baituallah Mehsud
Voadika ny 18 Oktobra 2018 6:10 GMT
Iray amin'ireo mpitari-tafika fototra tao Waziristan, ao amin'ny faritr'i Pakistana i Baitullah Mehsud (teraka tany amin'ny taona 1974) ary koa lehiben'ny vondrona mpandrindra miaraka miasa amin'ireo Talibana, ny Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) noforonina tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny volana desambra 2007. Avy amin'ny foko Mehsud izy, izay ao amin'ny faritra tsy milamina ara-politika ao Atsimon'i Waziristan ary mitarika miaramila mpomba talibàna eo amin'ny 20 000 eo. Nampangaina ho namono ilay Praiminisitra teo aloha, i Benazir Bhutto i Mehsud, ilay lehilahy karohina fatratra ao Pakistana [amin'ny teny anglisy]. Tomponandraikitra tamin'ny fanafihana ilay akademian'ny polisy tao Lahore ihany koa izy ary ahiana ho tomponandraikitra tamin'ny fanafihana maro samihafa mitovy amin'izany.
Miresaka momba ireo fomba fampihorohoroan'i Mehsud i Mohsin Segal, izay mitoraka blaogy ao amin'ny Pakistan Spectator:
I Baitullah Mehsud – izay nampirohorohoro ny firenen'i Karaci tao Khyber, tamin'ny alalan'ny andiana fanafihana fanaovana vy very ny aina, fanafihana tamim-baomba, fakana an-keriny sy fomba maro hafa mba hampitahorana – no mpampihorohoro Laharana 1 ao Pakistana. Nahazo fanohanana maro izy ary ankehitriny, afaka manakorontana manerana an'i Pakistana iray manontolo. Tsy nipoitra avy amin'ny tsy fantatra ny heriny, nahay nanararaotra ireo zavanitranga izy. Mampiditra vahiny mpiantafika izy, izay mirenireny tsy misy tanjona mazava, amin'ny anaran'ny finoana silamo ary mampiasa azy ireo toy bala famahànana tafondro.
Il est de notoriété publique que Baituallah Mehsud évite les apparitions en public ainsi que les photos. Voici une vidéo, mise en ligne sur Istream.in qui le présente dans une de ses cachettes présumées:
Fantatra tsara fa misoroka ny fisehoana imasom-bahoaka ary koa ireo fakàna sary i Baituallah Mehsud.
Ny 17 jona, nandrafitra tetikady hiatrehana ilay lehiben'ny talibana, i Baitullah Mehsud sy ny tariny tao Atsimon'i Waziristan tamin'ny fomba ofisialy ny tafika pakistaney.
Hazavain'i Jauhar Ismail, mpitoraka blaogin'ny All Things Pakistan [amin'ny teny anglisy] ny anton'ny famelezan'ny tafika :
Na dia tsy mifanaraka momba ny fandrindrana ny tetikady ara-potoana aza ireo mpandalina ao amin'ny tafika, mazava ho an'ny rehetra fa fepetra ilaina mialoha mba hanakanana ilay onja mpampihorohoro mianjera ao Pakistana amin'izao fotoana izao ny famonoana an'i Baitullah sy ny tambajotrana mpikatroka tarihiny. Fanampin'izany, ankoatra ny fialofana nomena ireo lehiben'i Al-Qaeda, mikarakara toby fampiofanana mpanao vy very ny aina maro ao atsimon'i Waziristan ny TTP. Nahavita nampiray tsara ny vondrona mpampihorohoro samihafa mba hiadiana amin'ireo ”fahavalo iombonany” ihany koa izy.
Mitondra ny anarana hoe ‘Rah-e-Nijat’ ity hetsika miaramila ity, izay midika hoe ‘Andeha mandeha any’. Tao anatin'ilay tetikady Rah-e-Nijat, mpitarika foko maro avy ao amin'ilay foko nisy an'i Baitullah no namadika azy. Manome ny fomba fijeriny an'ireo firaisana ireo [amin'ny teny anglisy] i Junaid Khan izay mitoraka blaogy ao amin'ny Pro-Pakistan :
Ankehitriny satria efa mananontanona ilay hetsika ara-tafika, toa miharihary ny fitriaran'ny firaisan'ireo Mehsuds. Tsy maintsy hisafidy ny ankolafy hisy azy ireo vahoaka ara-poko ao atsimon'i Waziristan satria sarotra ho azy ireo ny hijanona tsy hitanila manoloana izany.
Misisika amin'ny filana ity hetsika ara-tafika ity [amin'ny teny anglisy] ny lahatsoratra iray hafa navoaka tao amin'ny Urdu Maza :
Voasafidy tsara ny fotoana, nanaparitaka Pakistaney 3.5 tapitrisa izahay ary ankehitriny, tokony hanafoana ireo milisy rehetra ao avaratra sy atsimon'i Waziristan ny tafika pakistaney. Ampy tsara izany, toerana masina ho an'ny kolontsaina sy ny fiarahamonintsika ny faritra avaratra ary maneho ny fahadiovana sy ny hatsarantarehy, no sady paradisa ara-pizahantany: kanefa raha toa ka tsy fongorina daholo ireo mpanao ratsy ireo, mety hiteraka olana indray izy ireo.
Noho ny fanampiana nomen'ireo vahoaka ara-poko eny an-toerana ary koa ny loka mitentina 50 tapitrisa roupia pakistaney [amin'ny teny anglisy] omena izay hahita an'i Mehsud, antenain'ny rehetra mba ho haingana ilay hetsika. Kanefa, miatrika fiakaran'ny isanà mpitsoa-ponenana mandositra ny ady i Pakistana, ary, raha tsy maintsy haharitra ela ilay hetsika, tena hankany amin'ny loza mahatsiravina amin'ny maha-olona isika.